TrendForce dia mametraka an'i Apple ambonin'ny Asus amin'ny laharan'ny varotra solosaina | Avy amin'ny mac aho
TrendForce dia mametraka an'i Apple ambonin'ny Asus amin'ny laharan'ny varotra solosaina
Ary ity dia zavatra efa nambaran'ny maro mialoha sy ny varotra tsara amin'ny solosaina Apple nandritra ny volana farany tamin'ny taon-dasa ary tamin'ny fiandohan'ity taona 2018 ity, tao amin'ny TrendForce dia napetrak'izy ireo indray ny orinasa Cupertino ambonin'ny fivarotana ny iray amin'ny ASUS lehibe.
3 volana lasa izay dia nahita angona hafa mitovy amin'ny fitomboan'ny varotra ary mametraka ny fahefatra amin'ity laharana ity izay nasehon'ny orinasa mpandalina TrendForce. Ankehitriny dia voamarina ny toetry ny fahasalaman'ny varotra ary voatazona hatrany ny toerana iray ihany ambanin'ny HP, Lenovo ary Dell.
MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac mini, ary ankehitriny ny solosaina birao iMac Pro rehetra-in-iray vaovao, dia mandresy ny fifaninanana. Amin'ity tranga ity, ny sandan'ny tombana amin'ny telovolana manaraka amin'ny sonian'ny paoma manaikitra dia ny fitomboan'ny varotra ary noho izany dia hitohy amin'ny toerana fahefatra mendri-piderana izany.
Ny valiny ara-bola an'i Apple dia tsara, indrindra amin'ny lafiny tombony azon'ny iPhone, na dia eo aza ny zava-misy fa namidy singa vitsy kokoa noho ny tamin'ny fe-potoana mitovy tamin'ny telovolana teo aloha. Ny Apple Watch dia nahavita tarehimarika avo lenta niaraka tamin'ny maodely Series 3 vaovao ary ny Mac dia mitombo hatrany na eo aza ny zava-drehetra araka ny nolazain'i Apple. Amin'ity tranga ity dia ny mahazatra, ny totalin'ny varotra solosaina dia mihena raha oharina amin'ny taona lasa fa Apple kosa mitombo hatrany. Ity dia tsy isalasalana fa ny vaovao tsara indrindra ho an'ny marika dia ny fahitana ny vanim-potoana malaza taorian'ny paositra izay na dia "nanandratra" ny tenany tamin'ny iPad Pro aza izy ireo, dia elaela kokoa vao tonga noho ny noeritreretinao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » TrendForce dia mametraka an'i Apple ambonin'ny Asus amin'ny laharan'ny varotra solosaina